Dhaqtar Soomaaliyeed oo tallooyin caafimaad usoo jeediyay shacabka Soomaaliyeed – Geelle Magazine
Dhaqtar Soomaaliyeed oo tallooyin caafimaad usoo jeediyay shacabka Soomaaliyeed
caliahmed Posted On March 17, 2020
Tan iyo markii maalintii shalay aheyd ay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya shaacisay in qofkii ugu horreeyay ee qaba caabuqa corona laga helay gudaha dalka, waxaa jiray baaqyo kala duwan oo ay usoo jeedinayeen shacabka Soomaaliyeed madaxda kala duwan ee dalka iyo qaar ka mid dhaqaatiirta Soomaaliyeed, waxaa sidoo kale jirtay tallaabooyin kala duwan oo ay qaaday Xukuumadda Federaalka, kaasoo looga hortagayo fayruska faafa ee corona.
Ugu Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in laga billaabo 18-ka bishan la hakiyay dhammaan duullimaadyada caalamiga ah ee Soomaaliya taga ama ka baxa, kuwaasoo xayirnaan doona muddo 15 maalmood ah.
Tallaabadan oo sida la og yahay yeelaneys saameyn weyn ayaa loo qaaday sidii lagu xakameyn Caabuqan dhimashada sababa ee corona.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Warsame, oo ku takhasusay cudurrada faafa, kana tirsan Jaamacadda Seyniska Caafimaadka ee Boosaaso, ayaa sharraxay xanuunkan, wuxuuna bidhaamiyay sida ugu sahlan ee la isaga ilaalin karo.
Dr. Cabdiraxmaan oo la hadlay BBC-da ayaa yiri: “Covid-19 wuxuu ka mid yahay bahda cudurrada fayraska ah ee loo yaqaanno Coronavirus. Waxay isku nooc yihiin cudur hadda kahor Sacuudiga laga helay oo kasoo billowday geela iyo mid laga helay Shiinaha oo kasoo billowday bisadaha, dhammaantoodna waxaa la ogaaday in ay yihiin cudurro asalkooda kasoo billowday xayawaanka kaddibna u gudbay bani’aadamka”.
“Cudurkan wuxuu kuu gudbi karaa in faniinka qof qaba xanuunka uu kusoo gaara marka uu qufacayo ama hindhisayo iyo qof qaba fayraska oo ku salaama ama meel uu taabtay aad adiguna taabatid,” ayuu yiri Dr Cabdiraxmaan..
Dr. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay in gacmaha dhidida lagu kala qaadi karo caabuqan iyo in kale.
“Inkastoo cudurkan uu muddo gaaban jiro, ilaa hadda lama hayo daraasad muujineysa in maqaarka lagu kala qaadi karo, waxa kaliya ee la hubo waa in uu kaaga gudbi karo meelaha uu jirka ka duleylo, sida sanka, afka, iyo indhaha”, ayuu yiri.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Warsame waxa uu sidoo kale ku boorriyay shacabka Soomaaliyeed in ay intii karaankooda ah ka feejignaadaan kuwa uu haleelay cudurkan si uusan usii faafinin.
Dhanka kale wuxuu carrabka ku adkeeyay in Caabuqan uu la mid yahay sida hargabka, ayna inta badan isku calaamado yihiin, tirada dadka u dhintayna ay aad u yar tahay.
Hadalkaas ayaa meesha ka saaraya warar been abuur ah oo la isla dhex marayey, kuwaasoo sheegayey in qofkii uu cudurkan ku dhaco uu durba u dhimanayo.
Waddamada uu sida b’an u saameeyay cudurkan ayaa soo tabiyay in dadka ugu badan ee u dhintay ay yihiin dadka da’da ah.
Dr Cabdiraxmaan ayaa shacabka Soomaaliyeed u jeediyay talooyin dhowr ah oo ka caawin kara in ay xanuunkan ka fogaadaan.
“Dhammaan dadka waxaan kula talinayaa in ay raacaan talooyinka saraakiisha caafimaadka iyo dowladda. Ha iska daayaan wal walka iyo wararka baqdinta abuuraya, qofka marka uu qufacayo ama hindhisayo gacmihiisa haku daboolo afka iyo sanka, kaddibna ha iska dhaqo gacmaha. Gacmaha ku dhaqo saabuun iyo biyo ama isticmaal dareerayaasha kale ee loogu talagalay in ay jeermiska dilaan. Sidoo kale dadka guryaha joogana ha isticmaalaan waxyaabaha jeermiska dila, oo ha iska mariyaan miisaska dushooda, albaabada iyo wax kasta oo ay gacmahooda saari karaan”. Ayuu yiri Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Warsame.
Dalka Tanzania oo isagana ka mid ah dalalka bariga Afrika ayaa maanta isna xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus.
Hase yeeshee fiditaankiisa ayaa hadda dalalka caalamka ugu socda si aan caadi aheyn sida uu ugu fidayay gudaha Shiinaha oo kale, balse wararka qaar ayaa sheegaya in Magaalada asalkiisa uu kasoo bilowday Fayruskan oo kasii yaraanayo maalinba maalinta kasii dambeysa.
Golaha sare ee Culumada Sacuudiga oo amar dul dhigay dadka qaba Coronavirus